Gudiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo shaaciyey xiliga la qabanayo doorashooyinka deegaanka Puntland – Radio Daljir
Abriil 15, 2013 10:06 b 0
Garoowe,15 Apr 15, 2013 Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqey xiliga doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland qabsoomayaan oo ay shaaciyeen inay tahay 30-ka June,2013
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre (Shimbiralaaye) oo saxaafada maanta ?la hadlay ? ayaa sheegey ?ka dib markii ay shireen guddiga xubnihiisu isla qaateen xiligaas inay noqoto doorashadu.
?Markaan si qoto dheer u darasney guddigu waxa uu go’aamiyey inay dhacdo doorashada golayaasha degmooyinka Puntland 30-Ka June,2013” ayuu yiri gudoomiyaha gudiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland?
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Maxamed Farole ayuu sheegey gudoomiyuhu inuu ku soo saarey wareegto inay dhacdo doorashadi xiligaas oo ka ogolaadey guddiga soo jeedintan.
Doorashooyinkaan oo ay dhawaan qaar ka mid ah ururada siyaasadda Punlatland ay shaaciyeen inaysan ka qaybgalayn ayaa waxaa maanta gudiga doorashooyinka Puntland shaaciyeen in la qabban doono 30 bisha June ee soo socota.
Ma jiraan wax war ah oo illaa hada ka soo baxay ururadii dhawaan sheegay inaysan ka qaybgalayn doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland.